उपत्यकामा आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो, के-के गर्न पाइने ? (सूचीसहित) - समय-समाचार
उपत्यकामा आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो, के-के गर्न पाइने ? (सूचीसहित)
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार ०८:५१
काठमाडौं, भदाै २५ । बुधबार राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो हुने भएको छ ।
यससँगै उपत्यकामा सवारीसाधन सञ्‍चालनमा जोर-बिजोर लागु हुने जनाइएको छ ।
यससँगै काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गरिनेसमेत जनाइएको छ ।
बिस्तृतका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस
शैक्षिक संस्था, फिल्म हल र जिमखाना लगायत यसअघि बन्द गरिएका क्षेत्र नयाँ निर्णय नभइन्जेल बन्द नै रहने छन् ।
व्यापार व्यवसाय खोल्न दिने शर्तबारे औपचारिक निर्णयमा बिस्तृतमा खुलाइने एक अधिकारीले जानकारी दिए ।